Florida no voan'ny virus indrindra, Hawaii ny toerana fizahan-tany amerikana maty indrindra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Florida no voan'ny virus indrindra, Hawaii ny toerana fizahan-tany amerikana maty indrindra
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • LGBTQ • Vaovao • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Mpizahatany ao amin'ny seranam-piaramanidina Miami
Ny sidina mankany Florida sy Hawaii dia feno ny hotely. Matetika ny tsipika amin'ny trano fisakafoanana. Mpitsidika iray manadino fa tena any an-danitra COVID-19 izy rehefa mitsidika ny Sunshine, na ilay Aloha Milaza amin'izao fotoana izao.
Florida no manana ny tsimokaretina COVID-19 miely haingana indrindra any amin'ny Fanjakan'ny fizahan-tany lehibe ankehitriny miaraka amina tranga vaovao 25991 na tranga 1210 isaky ny mponina iray tapitrisa. 27 ny olona maty na 1.25 isan-tapitrisa
Hawaii no fanjakana maty indrindra US fizahantany misy 4 maty na 2.17 isan-tapitrisa. Hawaii dia nahitana tranga vaovao 845 na 584 isan-tapitrisa
Hawaii dia a Fanjakana demokratika, Florida a Fanjakana Repoblikanina.
Amerikanina an-tapitrisany no miteny hoe ENY amin'ny fialantsasatra,…. fa izao?
Tena tsy mitondra fahasamihafana firy amin'ny virus COVID izany raha fanjakana amerikana no tantanan'ny governora repoblikana na demokratika.
Tian'i Florida sy Hawaii ve ireo mpitsidika maty?
Ny fanokafana fanjakana iray amin'ny fizahan-tany dia mety ho fomba iray ihany koa izay manokatra ny Fanjakana hanoratra areti-mifindra COVID avo. Misokatra malalaka ho an'ny fizahan-tany i Florida, ary toy izany koa i Hawaii, mandray ireo mpitsidika amin'ny sandriny malalaka.
Ny 92% n'ny mpandeha LGBTQ any Etazonia dia vita vaksiny. Soa ihany ireo fanjakana roa ireo fa tia ny LGBTQ.
Nifandimby nifaninana ny fanjakana roa tonta nandritra ny herinandro vitsivitsy izay misy ny valan'aretina ratsy indrindra amin'ny tranga COVID-19 vaovao, ary samy mandà ny hiantso fameperana misy dikany bebe kokoa amin'ny indostrian'ny mpitsidika mitady vola ireo firenena roa tonta.
Ny fampitahana dia mifototra amin'ny statistikan'ny COVID 19 ho an'ny anio fa tsy ny ora fanampiny.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nanana ny ambany indrindra COViD-19 isam-panjakana i Hawaii. Ny isa dia nidina ambany indrindra ka nampatahotra taorian'ny famerana ny dia sy ny fepetra takiana dia novaina tamin'ny fiandohan'ity volana ity.
Amin'ny 18 aprily 2020, ity famoahana ity nitatitra momba ny Hawaii nakatona after COVID -19 ny isan'ny aretina dia nihoatra ny 100 tao anatin'ny iray andro. Vao tamin'ity herinandro ity i Hawaii dia efa nahatratra 1200 ny aretina vaovao tao anatin'ny iray andro, ary ny fizahantany dia mbola miroborobo miaraka amin'ny famerana tsy hita miharihary.
Nisokatra ho an'ireo mpitsidika vita vaksiny i Hawaii tamin'ity volana ity, ary ho an'ireo mpitsidika tamin'ny fitsapana ratsy hatramin'ny Oktobra 2020.
Saron-tava fialan-tsasatra any Hawaii sy ny fepetra takiana amin'ny halavirana ara-tsosialy any amin'ny trano fisakafoanana, hotely, ary toerana hafa ao an-trano, ary Mipoitra ny COVID raha miroborobo ny fizahan-tany.
Nandositra i Florida tamin'ny fisorohana ny ankamaroan'ny fameperana, nitazona dokam-barotra ho toerana fitsangatsanganana tsara, ary mitifitra ny COVID.
Samy manana ny itovizany Florida sy Hawaii ary Hawaii fa ny fielezan'ny COVID dia avo indrindra amin'izao fotoana izao amin'ny fampitahorana ireo mponina maro hanafina ao an-tranony.
Raha mbola manana fandriana amin'ny hopitaly ampy i Hawaii amin'izao fotoana izao, dia efa niparitaka hatrany amin'ny lalantsara ny efitrano fitsaboana any Florida.
Tao anatin'ny herinandro lasa izay, Florida dia nanana tranga COVID betsaka kokoa noho ny fanjakana 30 rehetra misy tahan'ny tranga ambany indrindra, atambatra.
Ireo fanjakana roa ireo dia manana vaksiny feno mihoatra ny 50% amin'ny mponina ao aminy, ary fantatry ny fanjakana roa fa ny isan'ny loza dia ao amin'ny toby tsy vaksiny.
Ny Fanjakana roa tonta koa dia mila ny toekarem-pizahantany mba hiroborobo sy handresy 'handinika fameperana henjana. Ny governoran'i Hawaii Ige dia nametraka fameperana an'ohatra hafa. Takiany izao ny trano fisakafoanana mba tsy hivarotany afa-tsy 50% amin'ny habakabany.
Satria mbola mikatona amin'ny ankamaroan'ny fizahan-tany iraisam-pirenena i Etazonia, dia miankina amin'ireo mpizahatany ao an-toerana ny firenena roa tonta. Tsy hita any Florida ireo mpitsangatsangana eropeana, fa ny Japoney sy ny Koreana kosa dia tsy tazana intsony any amin'ireo trano fisakafoanana, fivarotana ary morontsiraka any Hawaii.
Na izany aza, ny fizahan-tany any an-toerana dia manonitra izany fatiantoka izany ary niroborobo fatratra tahaka ny teo aloha.
Mampihomehy ny governora Ige ao Hawaii dia nilaza tamin'ny mpizaha tany fa tsy ilaina ny mandeha amin'izao fotoana izao, ary ny Fahefana fizahan-tany Hawaii dia nanandrana nanao ny dia tany Hawaii araka izay azo atao. Izany rehetra izany dia mijanona eo amin'ny sofin'ny fahafatesana.
Mampihomehy ny fanamarinana ataon'ireo tompon'andraikitra fa tena tsy mifangaro amin'ny mponina ny mpizahatany, ary fantatry ny rehetra izany.
Hawaii sy Florida dia nanjary nifanakaiky kokoa taorian'ny Hawaiian Airlines isidina tsy miato ntroduced avy any Honolulu mankany Orlando.
Ny "sisa amin'ny tantara" dia mbola tsy fantatra. Mampatahotra ny mieritreritra ny vokany akory, indrisy fa misy fehezanteny efa voasoratra eo amin'ny rindrina.
19 Aogositra 2021 amin'ny 13:53
Eto Hawaii, ny ankamaroan'ny tranga vaovao dia ny vondrom-piarahamonina miparitaka any amin'ireo fianakaviana sy fivorian'ny tsy mpizahatany. Raha tany amin'ny toeram-pizahan-tany fasika no nampielezana azy, fa tsy ny mpifanolo-bodirindrina aminay, dia ho nakatona indray ny fizahan-tany tao anaty fo. Tianay daholo ny manondro ny rantsan-tànana, fa tsy miambina ny tenantsika isika satria mora kokoa ny manondro ny rantsantanana amin'ny olon-kafa
Joan Enriquez-Noguera hoy:
17 Aogositra 2021 amin'ny 09:26
Raha ny tokony ho izy dia tsy misy dikany ny fandehanana any. Aza mandeha intsony. Mijanona ao an-trano. Halavirany eo amin'ny fiaraha-monina, manaova sarontava, sasao tanana, manadio tanana, mba hahafahantsika miatrika izany ary mamerina ny aintsika. Amin'ity taha feno fitiavan-tena ity na fanomezana tombony azo dia mbola hamono antsika foana isika ary harary. Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=XNUMX ''
ambany i raymond hoy:
17 Aogositra 2021 amin'ny 06:28
aza tongava tsy miraharaha.
17 Aogositra 2021 amin'ny 04:49
Rehefa nijanona ny fanandramana ho an'ny olona vita vaksiny Comimg nankany Hawaii dia nanomboka nitombo ny tranga tao anatin'ny herinandro vitsivitsy ny olona nanao vaksiny dia nampihena ny trano fisakafoanana sy trano fandraisam-bahiny ho 50% dia tsy hanakana ny olona hitondra izany fa mila sedraina izy ireo alohan'ny hidirany any Hawaii.